Ushutha ekhuluma ngempilo yakhe uTina | Isolezwe
Ushutha ekhuluma ngempilo yakhe uTina
Isolezwe / 22 June 2012, 1:58pm /
UTina umatasatasa ushutha i-documentary yempilo yakhe esaphila njengoba ethi kumele kushintshe abantu bangakhunjulwa sebekobandayo
UMATASATASA umculi ophinde abe ngumlingisi kuleli okuyimanje ushutha iDocumentary ngempilo yakhe kusukela ebuncaneni bakhe kuze kube yimanje ezobizwa ngeThe Diary Of Tina Mkwaiwa.
UTina “Diva” Mkwaiwa osanda kuthola ithuba lokushaya ibuya kwiRythm City kwi-etv uthe kuvame ukuthi kukhunjulwe imisebenzi yabantu sebekobandayo kodwa yena uthe kumele kushintshe lokho.
Njengamanje uthe sebeshuthe iziqephu ezingu-5 kanti kubhekwe ukuthi zibe ngu-26 uma sezizonke. UJulayi yinyanga okulindelwe ukuthi kuphothulwe ngayo lo msebenzi.
“Lokhu ngikwenza ngenhloso yokugqugquzela ngiphinde ngifundise ngobunzima bempilo nakho konke osekungivelele kusukela ebuncaneni bami. Iyangikhathaza indaba yokuthi kuqala manje ukuthi kubonakale amagalelo amaciko okubalwa uLebo Mathosa noBrenda Fassie ngoba sebeshonile. Phakathi kwezinto ezizobe zifundisa kule documentary kubalwa nendaba yokonga imali njengoba sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukushona kwabaculi bengenalutho,” usho kanje.
Izindawo azoshuthela kuzona kubalwa eMalinda, e-Eastern Cape, kudlulelwe eBergville, KwaZulu-Natal, nokuyilapho uyise edabuka khona nezinye izindawo.
Izoveza nasesikoleni lapho ayefunda khona kumabanga aphezulu kudlulelwe naseTshwane University of Technology (TUT) lapho ayenza khona izifundo zobuciko kanti nokuzama kwakhe ukungena emculweni kuzovezwa kule documentary.
Esikoleni kuzovela nokuthi ubecula aphinde adanse nokuyizinkomba zokuthi akwenza manje kuyinto vele esegazini lakhe njengoba ekuwo umkhakha wezokungcebeleka.
UProsper Mkwaiwa oyimenenja yalo mculi osanda kukhipha i-albhamu esihloko sithi The Diva Is On Top aphinde angamele inkampani ebizwa ngeProtina Entertainment ngokuhlanganyela noTina uthe akukho abakushiya ngaphandle. Ubale nokuthi kushuthwa neziqephu zalapho esuke enandisa khona uDiva.
“Kuma documentary amaningi labo okusuke kubhalwe ngabo abalitholi ithuba lokusho ukuthi kuyiqiniso noma cha lokho abasuke bekuqopha. Kulokhu uTina uzobe ehlangene nabadidiyeli nokuzo-kwenza ukuthi kungabi bikho ukuphazama,” kusho uProsper.
Uphethe ngokuthi babheke ukuthi le documentary uma sebeyiphothulile ikhonjiswe kwaSABC noma kuMzansi Magic.